Farmajo oo dib ugu soo laabtay dalka | KEYDMEDIA ONLINE
Farmajo oo dib ugu soo laabtay dalka
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo ayaa saaka dib ugu soo laabtay dalka, kadib safar hal maalin qaatay, oo uu ku joogay dalka Jamhuuriyadda Diqomraadiga Congo.
MUQDISHO, Soomaaliya – Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo soo gaabiyay safar qorshihiisu ahaa labo maalin oo habeen ka hor uu ugu ambabaxay magaalada Kinshasa ee caasimadda Jamhuuriyadda Diqomraadiga Congo, ayaa saakay aroorti ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Farmaajo, ayaa mudadii halka maalin ahayd ee uu ku sugnaa magaalada Kinshasa, wuxuu kulan labo saac qaatay la yeeshay Madaxwaynaha Congo, Félix Tshisekedi, wuxuuna weydiistay inuu fududeeyo wada-xaajoodyo dhex mara isaga iyo Saamileyda Siyaasadda.
Lama oga sababta ka danbeysa in Farmaajo, uu soo gaabiyo Safarkiisa, waxaase la rumeysan yahay inuu waji gabax kala soo kulmay socdaalkiisa.
Farmaajo, oo qaati ka taagan cadaadiska reer galbeedka ayaa raadinaya gabbaad, wuxuuna ku jiraa olole xooggan oo ay garab ku siinayaan dalalka Ruushka iyo Shiinaha, si uu u helo Madaxweynayaal difaaca muddo kororsiga.
Dhanka kale, Madaxweynaha mudadu ka dhamaatay ayaa la rajeynayay inuu safarkiisa ku soo maro waddamo kale oo dhaca bariga iyo bartamaha Afriga, wuxuuse si kadis ah dib ugu soo laabtay dalka.